Izindaba - Isikali, isimo samanje, isabelo semakethe yabathengi yezentwasahlobo yezimoto ngo-2020 kanye nezibikezelo zobuchwepheshe ngo-2027
Imakethe yabathengi yemihlangano yamakhasi entwasahlobo yezimoto iyathuthuka maqondana noshintsho olwenzeka kancane kancane. Lokhu kuhamba kuyizinkomba zokuthuthuka kwezimakethe okwenzekayo njengamanje. Ukunyuka konyaka nonyaka kwemakethe kukhombisa ukukhuphuka okubonakalayo eminyakeni eyishumi ezayo ye-2020-2027 (isikhathi esacwaningwa).
Umbiko ubuye uchaze nezinye izindawo zebhizinisi ezingabanjwa. Abashayeli bezimakethe nezithiyo kuyizicucu zemvelo, kanti amathuba nezinsongo yizinto zangaphandle (zangaphandle) zemakethe. “Umbiko Wezimakethe Zabathengi Bamaqabunga Ezintwasahlobo Zezimoto” ubeka umbono wokuthi imakethe izothuthuka ngezikhathi ezithile esikhathini esinqunyiwe.
Umbiko uhlanganisa ukuhlolwa kwangempela kwemakethe. Njengoba inzalo iqhutshwa yisikhathi esinqunyiwe sokukhokhwa kwekhasimende nokuqhubeka kwezinto, lo mbiko ukhombisa izindawo ezibalulekile ezizoshayela inqubekela phambili. Lokhu kuhamba kubalulekile ukugcina ukungaguquguquki phakathi kwemali eyinhloko nemali etholwayo (ukungena kwemali). Ngaphezu kwalokho, indawo yokuzibophezela yombiko wemakethe ihlanganisa ababambiqhaza bamakethe abasindayo njengamanje. Lesi sigaba sikhuluma ngqo ngemibiko yezindleko zemisebenzi ehlukahlukene emakethe yabathengi yezingxenye zentwasahlobo zezimoto. Ucwaningo lwemakethe oluhlelekile ukuhlinzeka ngemininingwane eyisisekelo emayelana nezinto zokuma kwezilinganiso kanye nokuhlaziywa kwe-SWOT. Isigaba sephrofayili ehlanganisiwe siqhathanisa ukwakheka kwebhizinisi nedatha ephathelene nezimali. Kumele kuqashelwe ukuthi oxhumana nabo bebhizinisi abashiwo embikweni bangashintshwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Umbiko we “Automotive Leaf Spring Assembly Consumer Market” ubika imininingwane yezici zemakethe ezizofaka isandla ekukhuleni kwayo esikhathini esibekiwe (2020 kuya ku-2027). Umbiko wokuhlaziywa kwemakethe uqukethe izingxenye ezahlukahlukene zemakethe ezinomthelela omkhulu ekusebenzeni kahle kwemakethe. Isibonelo, izinto ezinjengamathrendi ezimakethe zingasiza izinhlangano ukuthi zinqume isifinyezo sezenzo ezizothathwa phakathi nesikhathi esichazwe ngaphambilini.
Imakethe yabathengi bezimoto zentwasahlobo yezimoto ifundwe ezindaweni ezahlukahlukene zemakethe zomhlaba ezinjengezinhlobo, izinhlelo zokusebenza kanye nezifunda zomhlaba jikelele. Kwenziwe ucwaningo engxenyeni ngayinye yezimakethe zomhlaba ukuthola imininingwane ewusizo ngesifunda ngasinye somhlaba.
Umbiko wahlanganiswa ngokusebenzisa izindlela ezimbili zocwaningo (njengamasu okucwaninga okuyisisekelo nasesekondari). Kuyasiza ukuqoqa imininingwane ecebile yolwazi ukuthola imininingwane ephumelelayo emakethe. Lo mbiko ofundisayo usiza ukwenza izinqumo ezinamasu ezinolwazi ngaso sonke isikhathi sesimo sezulu.
Umbiko wenze ukuhlolwa okubanzi kwemakethe yabathengi yezingxenye zentwasahlobo zezimoto eziphenywayo. Izincomo zemakethe ezikhonjiswe kulo mbiko zingumphumela wokuhlolwa ngokuphelele kusukela ekuqaleni futhi kwavusa ukugxekwa kubantu ababhekiswe kubo. Ingxenye eyisisekelo yocwaningo isiza ukuqonda isifiso sokubhekwa esikhuliswe ngamakhasimende akhona. Ithimba lethu lifunde izindaba zezenhlalo, ezepolitiki nezezezimali ukubheka izinto zesikhathi eside ezingavimba ukuthuthuka kahle kwemakethe yabathengi entwasahlobo yezimoto. Ngale ndlela, ngokususelwa ezibonelweni zakamuva, amalungu angashintsha inhlangano yawo ukuze asizakale futhi akhe isisekelo esisha samakhasimende.
Ukuze ucabangele ngokusobala ukuthuthukiswa kwezimakethe zamakhasimende, umnyango wethu onekhono ukhulise ukugxila ekufukameleni ngendlela efanayo, esabalele phakathi kwamabutho amahlanu kaPorter. Amandla amahlanu aqhuba isivivinyo amandla okuxoxisana abathengi, amandla okuphatha abahlinzeki, umsebenzi onobungozi wezinhlangano zama-novice kanye nalabo abangena esikhundleni, kanye nezinga lokuphikisana emakethe yabathengi yezingxenye zentwasahlobo zezimoto.
Umbiko upakisha amandla abantu ngabanye (abenzeli namakhasimende okugcina) abashayela imakethe ngendlela efanayo. Inhloso yombiko ohlanganisiwe ngumbono wemakethe yezimakethe zabathengi zezingxenye zentwasahlobo zezimoto ezincintisana nabancintisana nabo.
Yiziphi izitayela zakamuva, amamodeli amasha nentuthuko yezobuchwepheshe emakethe yabathengi yemihlangano yezimoto entwasahlobo yezimoto? • Ngesikhathi sesimo sezulu, yiziphi izinto ezithinta imakethe yabathengi yemihlangano yezimoto entwasahlobo yezimoto? • Emhlabeni jikelele, yiziphi izinselelo, izinsongo nobungozi obhekene nomhlaba? Izithuthi zamaqabunga entwasahlobo yomhlangano wabathengi? • Yiziphi izinto ezishayela futhi zikhawulele imakethe yabathengi emihlanganweni yasentwasahlobo yezimoto? • Sithini isidingo somhlaba wonke semakethe yabathengi bezimoto zentwasahlobo? • Ngabe usayizi wemakethe yomhlaba wonke ungakanani esikhathini esizayo? ? • Yiziphi izindlela ezahlukahlukene ezisebenzayo zebhizinisi ezilandelwa izinkampani zomhlaba wonke?
Uma uneminye imfuneko yangokwezifiso, sicela usazise futhi sizokunikeza imibiko yangokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.